Umsebenzisi ngamunye has isiteshi ayo ku-Youtube, sifuna ukuthola ababhalisile. Yenza umsebenzi, ungasebenzisa izinga okusezingeni ukwenza banner. Isiteshi Hat - lena into yokuqala sigqamile ababhalisile esizayo. Ngakho-ke, kubalulekile ukuze alenze sihle. Esihlokweni lanamuhla imayelana nendlela ukwenza banner "Yutuba".
Kuwufanele benaka yokuthi isiteshi nge cap ubukeka ungcono ngaphandle kwalo. Lapho ngifuna amavidiyo amahle ungabona eningi Amakhasi abanezizinda grey esikhundleni isithombe. Ezimweni eziningi, abasebenzisi vese nje uvale iwindi futhi uqhubeke ukupheqa ohlwini nge imiphumela Ukukhishwa. Iqiniso lokuthi ukuxhumana anjalo abakwazi abambe isithakazelo ababukeli futhi uyihlupha kubo. Abantu ufuna okuthile okuthakazelisayo futhi ezimibalabala.
Injongo eyinhloko yokwakha isiteshi ku-Youtube kuyinto sokutshela lutho ababhalisile. Kodwa yini okufanele uyenze uma awanasithakazelo ekwamukeleni lolu lwazi? Ukuze kwandiswe inombolo yokubukwa, kuzomele ulande umsele banner elikhanyayo, i-trailer umbukwane namavidiyo esiyingqayizivele. Lawa Izingxenye ezisemqoka igobolondo, kanye isiteshi esikhulu izakhi ukukhangisa. Ngokuvamile ezisithintayo isibalo ababhalisile.
Ukudala izigqoko for the phezulu kwekhasi
Indlela yokwenza banner "Yutuba"? Okokuqala udinga ukucacisa umbala. Zonke izici isiteshi kufanele kuvumelane nomunye. It is hhayi Kunconywa ukusebenzisa ipulani eyinkimbinkimbi. Simple isigqoko isiteshi ubukeka kucocekile.
Ifulege kufanele ibe ulwazi mayelana nemisebenzi yomsebenzisi. Hhayi Udinga ukucacisa inkomba "oqondile". Kufanele usebenzise ubudlelwane. Ngesikhathi esifanayo kufanele igcinwe design jikelele. Kuyadingeka ukuba senze konke ulwazi isiteshi cap.
Isivakashi owabona banner kumele ngokushesha ukuyichaza ukuthi kwakwenzekani enkundleni. Musa overload nge engadingekile ulwazi lesiteshi isigqoko kanye nengemuva ezimibalabala. Lezi zici ukuphazamisa ababukeli futhi kuvimbele adlulisele kubo leli qiniso eliyisisekelo.
Indlela yokwenza banner "Yutuba" nomlayezo? Ukuze wenze lokhu, kudingeka beveza umbhalo esifushane futhi unamathisele isithombe "Photoshop". Lapho ukuklanywa isiteshi singakhohlwa usayizi umyalezo. Umbalo omkhulu kule sithombe singaba ngalesi siyingi kubangele ubuhlungu ababhalisile. Umlayezo omncane ayibonakali isibukeli.
Kufanele sizame ukuba anamathele endabeni asho segolide. Ekuqaleni, kuyoba nzima kakhulu. Ngemva kwesikhashana uzofunda indlela ukunquma usayizi umbhalo iso. Umlayezo ingaqukatha ucingo lifihlakele esenzweni.
Ngokuvamile, abasebenzisi bacelwa ukuba uchofoze isixhumanisi. Musa ukwenza kube obtrusive kakhulu. Kungenjalo, umnikazi wesiteshi ngeke okwesabisa izithameli.
Indlela yokwenza banner "Yutuba" nombhalo ahehe? Ukuze wenze lokhu, umsebenzisi kudingeka ukhethe font enhle. Legibility kubaluleke kunosayizi okuqukethwe kanye umyalezo. Uma umsebenzisi ukhetha font ihlangana ku ngemuva, akekho umuntu ongafunda ke. Imibhalo Eqoshiwe kufanele abe esifundekayo.
Plain isithombe esihle akusho zidonse ukunaka kwanoma ababukeli. Uma wayefisa, ungakwazi ukwenza isiteshi banner "Youtube" opopayi. Isithombe akubukeki obtrusive kakhulu noma dazzled. Kuyadingeka ukuba ukhethe ikhwalithi yesithombe. Uma umsebenzisi akazi ukuthi ukuze ungeze izithombe, kufanele ushiye esimile.
Indlela yokwenza banner "Yutuba" ngaphandle ngokweqile esiteshini? Ukuze wenze lokhu, khetha isithombe naphakathi. The ephansi banner, ngcono ijubane video download. Uma isithombe likhulu kakhulu, izovela izibalo ezimbi.
Lapho ukwenza banner "Yutuba"
Dala cap isiteshi kungaba kunoma iyiphi umhleli isithombe. Abasebenzisi abaningi bangathanda ukwazi ukuthi ukwenza banner "Yutuba" e "Photoshop". Ukuze wenze lokhu, khetha isithombe esikhulu baliqume kumhleli. Ngakho kubalulekile ukuba ugxile usayizi wesithombe 2560h1440 pixels. Uma isithombe lincane, kuwebhusayithi yayo ngeke samukele.
Usayizi "zone ephephile" kuyinto 1546h423 pixels. Le ndawo uboniswa zonke iziphequluli, kungakhathaliseki ukuthi ukulungiswa kwesikrini. Isithombe esiphelele, kuyinto efiselekayo ukugcina ngefomethi .jpg. usayizi wefayela yesithombe kumelwe ibe ngaphansi 4 MB.
Ukubeka unhlokweni isiteshi
Uma umsebenzisi kuqala Ukulayisha isithombe, kumelwe chofoza inkinobho eluhlaza okwesibhakabhaka "Engeza banner". Iwindi livela lapho ukhetha isithombe. Uma umsebenzisi ufuna ukushintsha banner esungulwe, ukuba athuthe isikhombisi phezu isithombe bese uchofoza isithonjana umsizi phezulu. Loader ngeke lapho ukhetha isithombe.
Uma wayefisa, umsebenzisi ungabheka indlela isiteshi cap ukuboniswa kumadivayisi. Ukuze uhlele izithombe kumele chofoza inkinobho "isivuno." Okulandelayo, kufanele uhlole umphumela. Isayithi sizobonisa ukuthi kubukeka kanjani ibhena kwi-PC, ithelevishini kanye namadivayisi eselula.
"Ayikwazi ukususa ifolda" hhayi imbangela yokwethuka
Nokwenza seo kanye nokugqugquzela e izinjini - yini eyabangela udumo?